MACLUUMAADKA JUG DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Macluumaadka Jug Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Jack Russell Terrier / Pug ey isku dhafan oo isku dhafan
Isu dheji 'Jack Russell Terrier / Pug mix' oo jira 1½ sano jir— 'Dollop waa eey weyn, aadna u koolkooliya. Waxay umuuqataa inay u janjeeraan dhankeeda Jack Russell taas oo ah inay madax adagtahay oo aysan waligeed tamar ka dhamaan. Waxyaabaha ay jeceshahay waxaa ka mid ah inay ahaato udub-dhexaadka u fiirsashada qof walba — xitaa haddii ay iyadu dalbato — iyo waxqabad kasta oo keenaya inay cunto hesho. Waxay leedahay nacayb gaar ah oo loogu talagalay faaruqinta. '
Juggu ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Jack Russell Terrier iyo Baabuur Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka nooc kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Jug
Naadiga Naqshadeeyaha eeyaha Kaynta = Jug
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Koonfur
Chloe the Jug at 2 sano jir ah— Iyadu waa qof aad u jecel oo weyn oo leh carruur, bisado iyo eeyo kale. Waxay qaadataa ka dib JRT waana tamar aad u sarreysa oo caqli badan. Juggu waa inuu helaa daarad deyr leh maadaama ay jecel yihiin inay ordaan oo wax qotaan. Way ceyrin doonaan dabagalo, bakayle, iwm, marka daaradda waa in si hubaal ah loo ooday. '
dhirta isku dhafan ee 'sper' shaybaarka 'puer' eey yar yar oo iib ah
Waxaan qaatay Ollie-ga kahor Kirismaska. Isagu waa Jack Russell / Baabuur qas oo anigu kama farxi karo sifooyinka isku-dhafkan. Wuxuu leeyahay xiiso badan iyo ciyaar ciyaar, laakiin wuxuu si isku mid ah u xiiseeyaa waqtiga dhabta ah ee lala yeesho Hooyo. Waxa kale oo uu ku raaxaystaa waqti uu la yeesho eeygeena kale ee isku dhafka ah ee Terra oo hooyadeed ay tahay ilma daahir ah Golden Retriever waxaan aaminsanahay aabe shaybaar madow . Xaaladda Ollie, wuxuu u baahan yahay wan iyo bariis cunnada eyga ah, waana inaan hubiyaa in qofna uusan siin wax hilib doofaar ku jira. Waxaan jecelahay daawashada Cesar Millan ee Eyga Xanaaqa ah waxaanan ka qaatay talooyin badan bandhigga la xiriira inuu yahay hogaamiyaha baakadka. Waxaan ahaa tababaraha eyga oo leh barnaamijka degmada 4-H ee deegaanka waxaanan ku dhawaa dhammaan noocyada taranka sannado badan maamulayaasha Cesar waa kuwo layaableh. Ollie wuu yeelan karaa dabeecad marka uusan helin waxa uu doonayo markuu rabo, marka runtii waa inaan u adeegsadaa doorka adag ee sheegashada. Waxa uu leeyahay a wadid aad u sareysa si aad u daawato dabagaaleyaasha iyo chipmunks oo si xoog leh ugu ciyi doona iyaga. Mararka qaar waxaan u daayaa banaanka dusha sare ee ku lifaaqan si aan u eryo, HA HA. Wuxuu u maleynayaa inay fiicantahay. Waxa kale oo aan soo saaray toy uu runtii leeyahay wadis uu ku ciyaaro waa kubbad adag oo balaastik ah, baaxad weyn oo aan ku dhegi karin daamankiisa (runtiina way xoog badnaan kartaa) waxayna ku dhex leedahay laba kubbadood oo bir ah. Waxaan u ogolaaday inuu ka daba tago dabaqa 1-aad ee gurigeenna. Waxaan iska xirayaa qaybo badan oo meela badan ah si ay ugu dhegto. Waxaan sidoo kale haystaa aagga ugu muhiimsan ee lagu ciyaaro oo si fiican kubbadda loo caddeeyey. Haddii ay meel ku dhegto badanaa wuu imaanayaa wuuna i qaadan doonaa laakiin waa inaad isha ama dhagaha banaanka u saartaa tan iyo markii uu ka qaadayo jahwareerkiisa wax kasta oo u dhow. Tan waxaa ka mid ah xargaha dheereynta, daahyada albaabada deyrka ama ottoman-ka. Lahaanshaha joogteynta xeerarka dhaqanka wanaagsan inta lagu jiro waqtiga ciyaarta ayaa guriga ka ilaalinaysa in lala wareego dabeecaddan yar. Marka guud ahaan, tarankaani waa farxad in la helo. Isagu waa wehelkeyga joogtada ah, wuxuu jecelyahay dareenka qofkasta dabcan wuxuu u maleynayaa inuu yahay kan ugu fiican. Runtii aad baan u jeclaaday aragtidiisa aragtida koowaad laakiin shaqsiyaddiisa ayaa runtii qalbigayga qaadatay. '
Xidhmooyinka Jugs (Jack Russell Terrier / Pug mix) - 'Otto xagga hoose waa 1/4 Jack Russell Terrier (hooyadiis waxay ahayd badh iyo badh), Phyllis dhexda ayaa ah 1/8 JRT, wiilkoodana dusha sare ka jooga Solo ayaa ahaa midka kaliya ee qashinkiisa ku jira.'
iskudhaf spaniel cocker retriever khasaaro
'Benedict, Florence and Nooner, Jug puppy at 8 toddobaad jir - waalidkood labaduba waa Jugs. Otto, aabahood waa 1/4 JRT iyo Phyllis, hooyadood waa 1/8 JRT. '
Waxaan Eygayga baray sida loo gacan qaado gacmaha eeyaha. Way samayn kartaa taas wayna istaagi kartaa oo wareegsan ku wareegi kartaa. Waxay jeceshahay carruurta iyo xayawaannada kale weligood wax duqsi ah kuma dhaawacmin. Way jeceshahay qof walba. Magaceedu waa Zoey. Waxay ahayd Jugga kaliya ee cad ee ka soo baxa qashinka. Aad ayaan u jecel nahay. '
'Tani waa Bugsby. Cayayaanka ayaa jira afar bilood. Hooyadiis waa Jack Russell Terrier aabihiisna waa Pug. Ninkaygu wuxuu ii soo iibsaday Cayayaanka anigoo ah hadiyad Kirismas ah. Dhiqlaha waa mid cajiib ah oo caqli badan, si kastaba ha noqotee wuxuu dalbanayaa fiiro gaar ah iyo jimicsi. Markaanu shaqeynaynno annaga lugee cayayaanka dhowr mayl maalintii . Marka aan shaqeyneyno, waan soo qaadnaa waana la soconnaa mar kasta oo aan nasasho qaadanno. Isagu ma ahayn mid aad u adag in guriga la jajabiyo ... kaliya wuxuu u baahan yahay is waafajin. Waxaan u kaxeeyay dhakhtarka xoolaha shalayto taxanihiisii ​​u dambeeyay ee cuncun iyo raabiyada ugu horeeya ... hada culeyskiisu waa 9 rodol. Wuxuu noqon karaa eey yar, laakiin wuxuu leeyahay dabeecad ey weyn. Waxba kama baqo. Cayayaanka ayaa aad u macaan. Isagu waa qof kalgacal badan, laakiin wuxuu ku raaxaystaa qashin-qubka sidoo kale. Mararka qaar wuu qaniinaa marka uu ciyaarayo waana ka shaqeyneynaa taas. Ma jecla in loo sheego 'Maya' Inta badan ma ciyo ... kaliya markii uu ka shakiyo hanjabaad ama marka aad u sheegto Maya Markii aad u sheegto Maya, wuxuu ku eegaa si kedis ah ka dibna wuu kugu hayaa si uu u muujiyo xanaaqiisa. Waan jeclahay isaga waana cabsi badan. Wuxuu jecel yahay inuu ku dhex maro gawaarida makhaayadaha halkaas oo dadku u sheegi doonaan sida loo jecel yahay.
Butters the Jug (Pug x Jack Russell Terrier mix) da'da 3 sano
Nugly the Jack Russell / Pug mix (Jug) - milkiilihiisa ayaa leh, 'Nugly waa qof soo jiidasho leh markuu doonayo inuu noqdo (Pug). In kastoo, isagu aad buu u sarreeyaa (Jack Russell). Waxaan ka helay Nugly markii uu 3 bilood jir ka ahaa bakhaarka xayawaanka. Waxay igu qaadatay oo keliya 2 toddobaad in guriga la iga jajabiyo iyo 3 toddobaad oo aan fadhiisto, oo aan amarka jiifo, oo aan cagaha siinayo. Waa nin caqli badan. '
dibi isku darka terrier rat
Maggie oo ah cunugga madow iyo tan Jug eeyaha ah ee jira 7 bilood jir— Waxaan u safarnay waddo dheer si aan u soo helno iyaduna aad ayey ugu qalantay. Way hunguri weynaan kartaa waxayna leedahay adkeysi uu leeyahay Jack Russell Terrier. Waxay jeceshahay inay ciyaarto oo waxaa lagu amaanay sida wanaagsan ee ay dadka ula joogto.
'Tani waa Tootie the Koonfur sida eey yar oo jirta 3 bilood. Iyadu waa a Jack Russel / Baabuur isku dar. Aad bay ugu faraxday inay ku haysato gurigeenna. Tootie waa mid caqli badan oo firfircoon. Waxay ahayd jacayl aragtida koowaad iyada iyo wiilkayga (4 jir). Meel kasta oo aan u qaadno iyada ayaa si toos ah nalooga joojiyaa dadka waddada ka baxsan maxaa yeelay iyadu waa uun CUTE. Waqtiyada qaarkood way dhuuman kartaa waxayna isku daydaa inay ka baxdo waxyaabo aysan ahayn inay sameyso. Waxay si fiican ugu habboon tahay carruurtayda. lol. Waxaan aad u jecel nahay Tootie! '
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo Jug ah
Sawir gacmeedka 1
Sawir gacmeedka 2
i tus sawir ey ey bichon ah
beerka jarmalka yar yar eeyaha yar yar ee tilmaamaya
sawirada eeyo yaryar oo terrier ah
3 bilood buluug sanka buluugga ah